Amaphoyisa akhala ngesiteshi sawo esinganakiwe | Scrolla Izindaba
Amaphoyisa akhala ngesiteshi sawo esinganakiwe
Esiteshini samaphoyisa sasemakhaya i-Nondweni eNquthu abakwasidlodlo kumele basebenze khona begade ukuthi bangashaywa izinyoka eziyingozi.
Lesi siteshi samaphoyisa sesigcwele izinyoka ezinobuthi kangangoba amaphoyisa asebenza khona afuna indlela yokuphuma.
Iphoyisa elingathandanga ukudalulwa lithe kudingeke ukuba libaleke lizisindise ngesikhathi libona inhlwathi ingena egunjini okuvulwa kulo amacala.
“Ozakwethu bazame ukuyibulala ukuze bahlenge izimpilo zethu. Ukusebenza kulesi siteshi kubi,” kusho iphoyisa.
Izinyoka akuzona kuphela inkinga. Lesi siteshi sigugile futhi sidinga ukulungiswa kabusha. Asinazo izindlu zangasese noma umoya opholile kanti uma lina isiteshi sigcwala amanzi okuphoqa ukuthi amaphoyisa asebenzele emavenini.
Amaphoyisa atshele i-Scrolla.Africa ukuthi bake basebenza izinyanga eziyisithupha ngaphandle kwe-inthanethi ngemuva kokuthi umonakalo wemvula ucekele phansi ugesi ebhilidini.
La maphoyisa athe abona sengathi ukukhononda akusizi ngalutho njengoba sekuneminyaka ukukhala kwawo kunganakwa. Ngokusobala iziphathimandla azizange zibonise ukukhathazeka ekuthuthukiseni lesi sakhiwo.
Isiteshi samaphoyisa sise-Tintown Hill ngaphansi kweNduna uFisukwazi Hlatshwayo.
INduna ithe isimo saba sibi kakhulu yaze yanikeza uhulumeni wendawo indawo entsha yokwakha isiteshi samaphoyisa esisha, kodwa izicelo zabo aziphendulwanga.
“Ngamafuphi,” uthe “akuyona into engabizwa ngesiteshi samaphoyisa lesi. Ngisho nezimoto zamaphoyisa ezishayelwa ngamaphoyisa ziyihlazo. Angazi ngempela ukuthi kungani indawo ebaluleke kangaka ingaba kulesi simo.”
Uthe isiteshi samaphoyisa singesinye sezindala eNquthu ngoba sakhiwe ngeminyaka yango-1980 kodwa asibukeki neze njengesiteshi.
UNgqongqoshe wezemiSebenzi yoMphakathi uJomo Sibiya utshele i-Scrolla. Africa ukuthi lolu daba uzoludlulisela kuNgqongqoshe kazwelonke wezemiSebenzi yoMphakathi uPatricia de Lille “ukuqinisekisa ukuthi kuyashesha ukuxazulula lolu daba.”